Reviews - Lu Gyi Min - Cell Phone Villa
(၂)သိန်းဝန်းကျင်ထဲက ကင်မရာ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်များ
(၂)သိန်းဝန်းကျင်ထဲက ကင်မရာ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်များ ယခု တစ်ပတ်မှာတော့ (၂)သိန်းဝန်းကျင်ထဲက ကင်မရာ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်တဲ့ စမတ်ဖုန်း မော်ဒယ် တချို့ကို ရွေးချယ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ #Samsung Galaxy J2 Prime - ၁၅၉,၀၀၀ ကျပ် Samsung Brand ထဲမှာဆိုရင်တော့ Samsung Galaxy J2 Prime ဟာ လက်ရှိမှာ လူကြိုက်များပြီး အဝယ်များတဲ့ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့်လည်း (၁၅၉,၀၀၀) ကျပ် သာရှိပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာပိုင်းမှာ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် အချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ ကျောဘက်ကင်မရာ အနေနဲ့ 8MP ပါရှိပြီး အလင်းဝင်ပေါက် Aperture ကလည်း F/2.2 အထိ ချိန်ညှိရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ LED Flash လည်း ပါဝင်တာမို့ အလင်းနည်းတဲ့ နေရာတွေမှာလည်း အဆင်ပြေပြေ ရိုက်ကူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ Selfie ကင်မရာကတော့ 5MP ပါရှိပြီး LED Flash ပါဝင်တာကြောင့် Selfie ချစ်သူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ LED ဖွင့်ပြီး Beauty Mode လေးနဲ့ ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီး အိုကေမှာ စိုပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ #Huawei Y6II - ၁၉၅,၀၀၀ ကျပ် Huawei ထဲမှာဆိုရင်တော့ Huawei Y6 II ကို ညွှန်းချင်ပါတယ်။…
“လက်ထဲက မချချင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားတဲ့ Mi 5X”
“လက်ထဲက မချချင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားတဲ့ Mi 5X” Portrait Mode နဲ့ ရိုက်ရတာ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးပါပဲဗျာ....?Design မြင်ရုံနဲ့ မကိုင်ဘဲ မနေချင်လောက် ဖြစ်သွားစေတဲ့ Xiaomi ရဲ့ Mi 5X လေး…။ Xiaomi ရဲ့ မော်ဒယ်သစ်လည်းဖြစ်၊ Dual Camera လေးနဲ့ ဆိုတော့ ကိုင်ပြီးရင် မဝယ်ချင်ဘဲ မနေနိုင်တော့ဘူးဗျာ။?ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာတော့ Full Metal Body လေးဖြစ်တဲ့အတွက် လက်ထဲ ကိုင်ရတာလည်း ပေါ့ပေ့ါပါးပါးလေးရှိပြီး ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ ကိုင်တွယ်ရတာ စိတ်ဘဝင်ကျစေပါတယ်။Display ကလည်း IPS LCD ကို မသုံးပဲ LTPS LCD ကို သုံးထားတဲ့အတွက် ဝယ်ရမှာ တန်သွားပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ အရောင်ထွက်ကောင်းပြီး touch လည်း ပိုကောင်းပါတယ်။ Screen Size ကတော့ ၅.၅ လက်မရှိပါတယ်။ ရုပ်ထွက်အနေနဲ့ 1920x1080 pixel ရှိတဲ့ ရုပ်ထွက်ကို ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။Mi 5X ရဲ့ ထူးခြားသွားတဲ့ အချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ မေးမေးနေတဲ့ CDMA သုံးလို့ရလားဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ Mi 5X မှာ CDMA ရော GSM ကိုရော အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ GSM ကလည်း 4G Network အထိ အသုံးပြုနိုင်အုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ SIM ကဒ်ကတော့ နှစ်ကဒ်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတွေအရတော့ Mi 5X ကို…
“ ရိုးရှင်း မာကျောတဲ့ Nokia6” Nokia လို့ ပြောလိုက်ရင် ဘာကို ပြေးမြင်မိသလဲ?
“ ရိုးရှင်း မာကျောတဲ့ Nokia6”Nokia လို့ ပြောလိုက်ရင် ဘာကို ပြေးမြင်မိသလဲ? အကြမ်းခံတယ်…လိုင်းဆွဲအားကောင်းတယ်….ဘက်ထရီ သက်တမ်း တာရှည်ခံတယ်….ဒီဇိုင်းမိုက်တယ်….Ring Tone ကို ကြိုက်တယ်….Father is Back … ဟုတ်ပါတယ်.. .. မိုဘိုင်းဖုန်းလောကမှာ ဘိုးအေကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Nokia ဟာ ပြန်လာပါပြီ။ အရင်ကတော့ ကိုယ်ပိုင် ဒီဇိုင်းတွေ .. OS … တွေနဲ့ အပြောင်းအလဲမရှိ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ Nokia ဟာ အခုတော့ အပြောင်းအလဲ သစ်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရွှေမြန်မာတို့ အကြိုက် ထွက်ရှိလာပါပြီ…..။ရွှေမြန်မာတို့အတွက် မြန်မာဖောင့်ဟာ အလွန်ပဲအရေးပါပါတယ်။ ဒီအတွက် Nokia6မှာ Build in ပါဝင်လာပါတယ်။ Unicode အနေနဲ့ လက်ရှိမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို အသုံးပြုလာနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Root ဖောက်စရာ မလိုတဲ့အတွက် ဒီအချက်ကလည်း Nokia ကို ဝယ်ချင်စိတ် ပေါက်စေပါတယ်။ဒီဇိုင်းပိုင်းကလည်း ကျစ်လစ်ပြီး မာကြောတာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ လက်ထဲ ကိုင်ရတာလည်း အတော်လေး အဆင်ပြေပြေရှိလှတယ်။ မြင်တာနဲ့တင် ကြွေလောက်တဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံပါ။ မျက်နှာပြင် အရွယ်အစားကလည်း ၅.၅ လက်မဆိုတော့ လက်ထဲမှာ အံဝင်ခွင်ကျ ရှိစေမှာပါ။Display ကိုလည်း Corning Gorilla Glass3နဲ့ ဖုံးအုပ်ကာကွယ် ပေးထားပြန်ပါတယ်ဗျ။မှတ်ဉာဏ်ပါဝင်မှုကလည်း ROM 32GB , RAM3GB…